Turron စျေး - အွန်လိုင်း TUR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Turron (TUR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Turron (TUR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Turron ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Turron တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Turron များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TurronTUR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$3.16TurronTUR သို့ ယူရိုEUR€2.68TurronTUR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£2.42TurronTUR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.88TurronTUR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr28.61TurronTUR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.19.96TurronTUR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč70.51TurronTUR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł11.83TurronTUR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$4.23TurronTUR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$4.41TurronTUR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$70.65TurronTUR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$24.49TurronTUR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$17.1TurronTUR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹237.06TurronTUR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.530.49TurronTUR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$4.34TurronTUR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$4.79TurronTUR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿98.64TurronTUR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥22.02TurronTUR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥334.67TurronTUR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3760.11TurronTUR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1197.47TurronTUR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽232.79TurronTUR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴87.36
TurronTUR သို့ BitcoinBTC0.000273 TurronTUR သို့ EthereumETH0.00837 TurronTUR သို့ LitecoinLTC0.0552 TurronTUR သို့ DigitalCashDASH0.0327 TurronTUR သို့ MoneroXMR0.0338 TurronTUR သို့ NxtNXT233.43 TurronTUR သို့ Ethereum ClassicETC0.452 TurronTUR သို့ DogecoinDOGE910.33 TurronTUR သို့ ZCashZEC0.0341 TurronTUR သို့ BitsharesBTS125.28 TurronTUR သို့ DigiByteDGB117.76 TurronTUR သို့ RippleXRP10.83 TurronTUR သို့ BitcoinDarkBTCD0.109 TurronTUR သို့ PeerCoinPPC10.92 TurronTUR သို့ CraigsCoinCRAIG1437.31 TurronTUR သို့ BitstakeXBS134.53 TurronTUR သို့ PayCoinXPY55.07 TurronTUR သို့ ProsperCoinPRC395.8 TurronTUR သို့ YbCoinYBC0.0017 TurronTUR သို့ DarkKushDANK1011.47 TurronTUR သို့ GiveCoinGIVE6827.42 TurronTUR သို့ KoboCoinKOBO735.67 TurronTUR သို့ DarkTokenDT2.91 TurronTUR သို့ CETUS CoinCETI9103
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 20:55:02 +0000.